Football Khabar » लगातार हारबाट थाके क्लोप– ‘यतिबेला लिभरपुललाई जसले पनि सजिलैसित हराउन सक्छ’
लगातार हारबाट थाके क्लोप– ‘यतिबेला लिभरपुललाई जसले पनि सजिलैसित हराउन सक्छ’
एजेन्सी, फागुन २४
इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका प्रमुख प्रशिक्षक जोर्गेन क्लोपले टिम लगातार खराब नतिजबाट पीडित बनेपछि निकै निराशाजनक प्रतिक्रिया दिएका छन् । गत राति लिभरपुल आफ्नै घरेलु मैदानमा रेलिगेसन जोन १८औं स्थानका फुलहामसँग ०–१ ले हारेपछि क्लोपले मिडियासँग प्रस्तुत हुनेक्रममा निकै थकित र निराश देखिए । गत रातिको हार लिभरपुलका लागि यो सिजनको नवौं हार थियो । सो हारपछि लिभरपुल अंक तालिकाको आठौं स्थानमा झरेको छ भने समान खेलपछि लिग लिडर म्यानचेस्टर सिटीभन्दा २२ अंकले पछि परेको छ । गत सिजन ३० वर्षपछि प्रिमियर लिग जितेर इतिहास रचेको लिभरपुल यो सिजन ज्यादै खराब अवस्थामा आइपुगेको छ । लिभरपुलले लिगका पछिल्ला ७ मध्ये ६ खेल हारेर मात्रै १ खेल जितेको छ । उसलाई गोलको चर्को खडेरी यतिबेला परेको छ ।
यो सिजन लिभरपुल यसअघि नै इएफएल कप र एफए कपबाट आउट भइसकेको छ । यता, लिगमा आठौं स्थानमा पुगेपछि उसलाई अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट हुन पनि बहुत कठिन देखिएको छ । अब लिगमा १० खेल मात्रै बाँकी रहेको अवस्थमा लिभरपुललाई टप–४ मा फर्किएर अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट हुन पनि ठूलै लडाइँ गर्नुपर्नेछ । लिभरपुलले अघिल्लो सिजन युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो भने गत सिजन लामो समयपछि घरेलु लिग जितेको थियो । दुई सिजनलाई शानदार बनाएको ऊ तेस्रो सिजन भने सर्वनाक हालतबाट गुज्रिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा लिभरपुलको सम्भावना भनेको च्याम्पियन्स लिग लिग मात्रै हो । तर, अहिलेकै लय र प्रदर्शन हो भने त यो पनि उसका लागि फलामको चिउरा नै हुनेछ । किनभने, टोली अहिले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि निकै हतास र विचलित अवस्थामा छ । सो कुरा गत राति फुलहामसँग हारेपछि प्रशिक्षक क्लोप स्वयंले पनि स्वीकारे ।
फुलहामसँग निराशाजनक हारपछि क्लोपले आफूहरूसँग अहिले के भइरहेको छ भनेर बुझ्न नसकेको बताए । त्यत्ति मात्रै, उनले यो बेला जुनसुकै टिमले पनि लिभरपुललाई सजिलैसित हराउन सक्ने भन्दै निकै निराश अभिव्यक्ति दिए । क्लोपले आफैं र आफ्ना खेलाडीलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘हामी किन यसरी खेलिरहेका छौं ? हामीले किन गोल गरिरहेका छैनौं ? हामी किन शिर उठाएर खेल्न सकिरहेका छैनौं ? हामीलाई किन हार्ने बानी पर्दै गइरहेको छ ? यसको जवाफ अहिले मसँग छैन । तर, यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ । मेरो टिम र मेरा खेलाडीले पनि दिनुपर्छ,’ क्लोपले भने, ‘यो निकै कठिन समय हो । ७ खेल खेल्दा ६ खेल हार्छौं भने यहाँ एक वा दुई मात्रै समस्या छैनन्, थुप्रै समस्या छन् । अब पहिला समस्या पहिचान गरेर समाधानको खोजी गर्नुपर्छ ।’
मिडियासँग निकै हतास देखिएका क्लोपले आफ्नो बचाउ र प्रतिरक्षामा केही बोलेनन् । बरु, उनले त हार स्वीकारे । खराब समय चलिरहेको कुरा उनको भनाइबाट बुझ्न कठिन छैन । ‘हाम्रो खेल र नतिजाले यो देखाउँछ कि, हामी यतिबेला खराब फुटबल खेलिरहेका छौं । यतिबेला लिभरपुललाई जुनसुकै टिमले पनि सजिलैसित हराउन सक्छ,’ क्लोपले भनेका छन्, ‘म खुसी छैन । हामी पीडामा छौं । आगामी दिनमा सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हामी थप दृढ र एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । फुटबलमा यस्ता कठिन र खराब दिन आउँछन् । हामीसँग त्यो समय अहिले आइपुगेको छ । हामी संयम बन्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२०
बार्सिलोनाका नयाँ अध्यक्षले पूरा गर्लान् यी तीन बाचा ?
लिभरपुलको ‘हरिबिजोग’ : ६९ वर्षकै खराब स्थितिमा, च्याम्पियन्स लिगमा छनौट नै नहुने खतरा !
केन र बेल चम्किँदा टोटनह्यामको शानदार जित : लिभरपुल आठौं स्थानमा चिप्लियो
‘मेस्सीका खास प्रशंसक’ लापोर्टा बने बार्सिलोनाको नयाँ अध्यक्ष